The Backlink: Nkọwa, Ntụziaka, na Ize Ndụ | Martech Zone
Sọnde, Septemba 20, 2015 Monday, September 21, 2015 Douglas Karr
Ikwu eziokwu, mgbe m nụrụ ka mmadụ kwuru okwu backlink dị ka akụkụ nke atụmatụ zuru ezu m na-atụ ụjọ. Aga m akọwa ihe kpatara site na post a mana ịchọrọ ịmalite na akụkọ ntolite ụfọdụ. N'otu oge, engines ọchụchọ na-abụbu nnukwu akwụkwọ ndekọ aha nke ahaziri ahazi ma nye iwu dị ka ndekọ. Nchịkọta algorithm nke Google gbanwere ọdịdị ọchụchọ n'ihi na ha jiri njikọ dị ka ịdị mkpa nke mkpa.
Njikọ njikọ yiri nke a:
Isiokwu ma ọ bụ Nkebi ahịrịokwu
Otu hyperlink na-abata site na otu ngalaba ma ọ bụ subdomain na ngalaba gị ma ọ bụ na adreesị weebụ.
Ihe Nlereanya: Saịtị abụọ chọrọ ịhazi maka otu isiokwu. Ọ bụrụ na saịtị A nwere njikọ 100 na-atụ aka na ya na isiokwu ahụ na ederede arịlịka backlink, yana Site B nwere njikọ 50 na-atụ aka na ya, saịtị A ga-ebuli elu. Site na ọnụọgụ ndị mmadụ na-agbanwe site na injin nchọta, ị nwere ike iche n’echiche ihe merenụ. Industrylọ ọrụ $ 5 ijeri gbawara na ọtụtụ ụlọ ọrụ SEO mepere ụlọ ahịa. Ebe nrụọrụ weebụ nke nyochara njikọ malitere akara akara ngalaba, na-enye ndị ọkachamara nyocha ihe nchọta iji chọpụta ebe kachasị mma maka njikọ iji nweta ndị ahịa ha ka mma.
N'ezie, hama dara dị ka Google wepụtara algorithm mgbe algorithm iji gbochie ịgba egwu nke ogo site na mmepụta backlink. Ka oge na-aga, Google nwere ike ịchọpụta ụlọ ọrụ ndị nwere mmekorita azụlink na ha liri ha na igwe nchọta ihe. Otu ihe atụ a kpọsara nke ọma bụ JC Penney, onye goro ụlọ ọrụ SEO nke dị ha na backlinks iji wulite ogo ha.
Ugbu a backlinks na-adị arọ dabere na mkpa nke saịtị ahụ na njikọta isiokwu. Na imepụta ụda njikọ njikọ na saịtị na-enweghị ikike nwere ike imebi ngalaba gị ugbu a karịa inyere ya aka. N'ụzọ dị mwute, a ka nwere ndị ọkachamara na-arụ ọrụ Nchọgharị Nchọpụta na thatlọ ọrụ na-elekwasị anya na backlinks dị ka ọgwụgwọ iji nweta ndị ahịa ha ọkwa ka mma.
Ọ bụghị All Backlinks ka e kere nha
Backlinks nwere ike inwe aha dị iche (akara, ngwaahịa ma ọ bụ mmadụ), ọnọdụ, yana isiokwu metụtara ya (ma ọ bụ njikọta ya). Na ngalaba nke na-ejikọ nwere ike inwe mkpa maka aha, ọnọdụ ma ọ bụ isiokwu. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ dị na obodo ama ama ama na obodo ahụ (yana backlinks), ịnwere ike ịnọ n'ọkwá dị elu n'obodo ahụ mana ọ bụghị ndị ọzọ. Ọ bụrụ na saịtị gị dabara na aha akara, n'ezie, ị yikarịrị ka ọ ga-ebuli elu na isiokwu jikọtara ya na ika ahụ.
Mgbe anyị na-enyocha ogo ọchụchọ na isiokwu ndị metụtara ndị ahịa anyị, anyị na-ewepụkarị njikọ ọ bụla-isi okwu ma lekwasị anya na isiokwu na ọnọdụ iji hụ ka ndị ahịa anyị si eto nyocha ha. N'ezie, ọ gaghị abụ iru eru iwere na nchọta algorithms bụ ogo saịtị na-enweghị ọnọdụ ma ọ bụ akara… mana n'ihi na ngalaba backlinked ha nwere mkpa na ikike maka ụdị ụfọdụ ma ọ bụ ọnọdụ.
Ihe omuma: Gafere Backlink
Ọ ga-abụrịrị backlink nke anụ ahụ ọzọ? ịma nwere ike ibili na ibu ha na njin algorithms. Ihe e dere ede bụ ịkpọtụ okwu pụrụ iche n’ime isiokwu ma ọ bụ ọbụna n’ime ihe oyiyi ma ọ bụ vidiyo. Ntughari bu mmadu puru iche, ebe ma obu ihe. Ọ bụrụ DK New Media ekwuru na ngalaba ozo mana onodu ya bu marketing, gịnị kpatara na igwe nyocha agaghị atụle aha na ịbawanye ogo nke isiokwu DK New Media jikọtara ya na ahịa.
Enwekwara ihe omuma nke ọdịnaya di na njikọ ya. Ngalaba na-atụ aka na ngalaba ma ọ bụ adreesị weebụ gị nwere mkpa na isiokwu ịchọrọ iwepụta? Peeji ahụ nwere backlink na-atụ aka na ngalaba ma ọ bụ adreesị weebụ dị mkpa na isiokwu ahụ? Iji nyochaa nke a, igwe nyocha ga-ele anya karịa ederede ederede ederede arịlịka ma nyochaa ọdịnaya niile nke ibe ahụ na ikike nke ngalaba ahụ.
Ekwenyere m na algọridim na-eji usoro a.
Akwụkwọ ikike: Ọnwụ ma ọ bụ nlọghachi
Afọ ole na ole gara aga, Google wepụtara akara na-enye ndị edemede ohere ijikọ saịtị ha dere na ọdịnaya ha mepụtara na aha ha na profaịlụ mmekọrịta ha. Nke a bụ ezigbo ọmarịcha ọganihu n'ihi na ị nwere ike iwulite akụkọ ihe mere eme nke onye edemede ma sụgharịa ikike ha na isiokwu ụfọdụ. Ighaghachitere m afọ iri nke ide banyere ahia, dịka ọmụmaatụ, agaghị ekwe omume.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị kwenyere na Google gburu onye edemede, ekwenyere m na ọ bụ naanị gburu akara ahụ. Echere m na enwere ezigbo ohere na Google mepụtara algorithms ya iji mata ndị edemede na-enweghị akara.
Oge nke Njikọ Ego
N'ikwu eziokwu, enwere m obi ụtọ ọdịda nke ụlọ ọrụ backlinking. Ọ bụ oge ịkwụ ụgwọ-ụgwọ ebe ndị ụlọ ọrụ nwere akpa miri emi ji ego were goro ndị ọrụ SEO nwere ọtụtụ akụrụngwa iji mepụta backlinks. Mgbe anyị siri ike na-arụ ọrụ na-emepe emepe nnukwu saịtị na ọdịnaya dị egwu, anyị na-ele ka ọkwa anyị dara oge na anyị tufuru akụkụ dị mkpa nke okporo ụzọ anyị. Anyị kwesịrị ilekwasị anya na mgbasa ozi mgbasa ozi na nkwalite iji nweta okwu ahụ.
Ọdịnaya dị ala, ikwu okwu adịgboroja, na mkpụrụ okwu meta abaghịzi SEO Strategies - yana ezigbo ebumnuche. Dika algorithms algorithms na-abiawanye nke oma, o di nfe ichota (na ikpochapu) usoro ntinye aka.
N'ime afọ gara aga, anyị okporo ụzọ nchọta ihe nchịkwa dị elu 115%! Ọ bụghị algọridim niile. Anyị wuru saịtị na-anabata nke ọma nke na-arụ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ mkpanaka na mbadamba. Anyị tụgharịrị saịtị anyị niile na saịtị echekwara yana asambodo SSL. Mana anyị na-etinye oge n'ịtụle data ọchụchọ yana ịmata isiokwu (dị ka nke a) ndị na-ege anyị ntị nwere mmasị na ya.
M na-aga n'ihu na-agwa ndị mmadụ na SEO bụbu nsogbu mgbakọ na mwepụ, mana ugbu a ọ laghachitere na nsogbu ndị mmadụ. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ usoro ntọala iji hụ na saịtị gị bụ ezigbo ihe nchọta ọchụchọ, nke bụ eziokwu bụ na nnukwu ọdịnaya dị mma (na-abụghị igbochi engines ọchụchọ). Achọpụta ma nwee oke ọdịnaya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, wee kpọtụrụ ya ma jikọta ya na saịtị ndị dị mkpa. Ma nke ahụ bụ anwansi backlink!
Tags: backlinkernjikọ azụbacklinksmmụtanjikọpeeji nke algorithm
Nkuzi 3 Ndi ahia ahia kwesiri imuta site na ahia